Iringi yomlingo kunye nemimoya esi-7 yokuphucula ubomi bakho-Ilizwe lamaKhuselo
Ikhaya > Iringi yomlingo kunye nemimoya esi-7 yokuphucula ubomi bakho
Xabiso rhoqo € 65 Intengo yentengiso € 65 Ixabiso lento /nganye
Iringi yamandla omlingo, iringi yeWizard, ngamandla oomoya abasi-7, lawula ubomi bakho
Le mayibe yeyona ndandatho igcweleyo kwaye inamandla siyenzileyo ukuza kuthi ga ngoku. Esi sisongelo sikhethekileyo se-Abraxas sinokukunceda ngeendlela ezininzi onokufumana kunzima ukuzikholelwa. Jonga nje uphononongo kwaye uzibonele ukuba bangaphi abantu abafumene izibonelelo ezinkulu zeli lizwi lamandla.
Ingenza ntoni le ring?
Ukuba ufuna ukulawula yonke imiba yobomi bakho udinga iRingi yeAbrrasax. Le Iringi kaSolomon inamandla amdaka kakhulu afakelwe aphantse aphulukana nolwazi lomntu. Olu luyilo lukhethekileyo ludibanisa enamandla 7 Genii ngesifinyezo se-AX I-Abrasax okanye i-Abraxas zokukhusela kunye namandla.
Yintoni le i-amulet ikwenzele?
Isangqa se-abraxas okanye i-amulet ikulungele ukukunceda
Tyhila intsingiselo yamaphupha
Amagunya Hagith ugunyaza uVenus noLwesihlanu u-Hagith ulawula izinto eziphazamisayo. Ukhangisa Uthando, lunikela ngesondo olumangalisayo, luvuselela ubuKho noGrace, lufundisa ukwenza iNandi neMidlalo emihle. UHitith kukunika uvuyo kunye nobuhle kwaye udibanisa nemimoya yendalo
Zonke ezi zinto zinokusonjululwa ngolu hlobo i-amulet ekhethekileyo ye-Abraxas
Konke oku nokunye okuninzi kunokwenziwa ngesikhonkwane sikaSolomon / Abrasax. Awundikholelwa? Thatha ujonge lonke uphononongo esinalo kule ring kwaye sisiqingatha nje somkhenkce. Sikwanawo la mandla akhethekileyo kwi-amulet okanye iphini lepel. Jonga nje. Ukuba undibuze, ndiza kufumana i-3. Ukukhala, i-Amulet kunye nepini. Ngapha koko ezi zi3 endizinxiba mihla le.
Isangqa esihle sesilivere esine-sigil ye Imimoya yeOlimpiki kunye ne-Abrasax ebhalwe kunye neseshoni yethu ekhethekileyo yokuzahlulela ukuze iqiniseke ukuba iyakusebenzela.
Zenziwe nezacholo - Isilivere yaseSterling Iringi yamandla, ekwabizwa ngokuba yiRingi yeSortiarius okanye iRingi ka-Amon Ra isetyenziselwa ukwenza amandla amangalisayo oomoya abasi-7 ukufezekisa zonke iinjongo zakho. Le iringi luyilo olukhethekileyo olwenziwe yi-Springhawk emva kweentsuku ezininzi zokucamngca kunye kokubonisana nomoya wakhe guids kunye noncedo lwegrimmoire endala kakhulu.
Isondlo ngasinye okanye isangqa sinikezelwa kumnini kwaye asinakusetyenziswa ngabanye abantu. Ngoko ke, kubalulekile ukuba usixelele iinkcukacha zakho ezicacileyo ukwenzela ukuba i-Master Sortiarius inokugqiba isithethe esikhethekileyo sokumisela. Sitshele xa uyala:
Umhla wokuzalwa nendawo ohlala kuyo
le Iringi ineempawu ezikhetheke kakhulu kunye neentsingiselo kwit.
Unxantathu umele elidlulileyo, elangoku nelizayo, nto leyo ethetha ukuba umntu onxibe iringi anganefuthe kwezi (ziluncedo kakhulu Reiki Ikwabonisa umzimba, ingqondo kunye nomoya. Oku kunika umntu onxibileyo amandla amakhulu kubantu asebenzisana nabo. I-Mant Reiki iinkosi zisebenzisa le ring ukuze ukuphilisa njengoko befumana ukwanda kokuziva kunye namandla ukonyusa isibonelelo senkosi kunye nomamkeli.
Kodwa esi sisiqalo samandla endandatho. Iimpawu ezi-7 kwisikhonkwane zimele imimoya emi-7 yeOlymppi. Nganye kuzo inomoya wamandla amakhulu. Ziyaziwa kancinci kodwa zilapha ukukunika iminqweno yakho.
Ukudibanisa kwale mizimu ye-7 iya kukukwazi ukuzalisa zonke iimfuno zakho. Baya kusebenzelana okanye bahlangane. Konke kuxhomekeke kwindlela owakhupha ngayo
Okokugqibela, isangqa somoya esibizwa ngokuba yi-vortex yamandla. Umoya ufumanekile kuzo zonke iinkcubeko, kwihlabathi liphela ukusukela ekuqaleni kobomi bomntu. Imimoya isetyenziselwa ukubonisa nokubongoza amandla akhethekileyo kunye namandla amakhulu. Kuba ukubonwa kubekwe ngaphakathi koonxantathu kunye nonxantathu ngaphakathi kwesangqa, intsingiselo yokwenyani kunye nokusetyenziswa koku kukucela naluphi na uhlobo lwamandla ngoncedo lwemimoya esi-7 eza kusetyenziswa kwinqanaba lomzimba, lengqondo okanye lokomoya ngaphambili, yangoku okanye yexesha elizayo.
Itafile yokuguqula ubungakanani bentsimbi